Axmed Madoobe Oo Sabab U Noqday In La Afduubto Wiil Dhalinyaro Ah -News and information about Somalia
Home Warkii Axmed Madoobe Oo Sabab U Noqday In La Afduubto Wiil Dhalinyaro Ah
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa waxa uu la kulmay Siyaabo kala duwan Dad Badan Intii Xaflada Caleemo saarkiisa ka socotay Kismaayo 12-kii Bishaan.
Waxay Dhalinyarada qaar Madaxweynaha la galeen Sawirro ay Barahooda Ku faafiyeen.
Wiil ka mid ah Dhalinyaradii Axmed Madoobe La kulmay Sabtidii Isbuucii hore ayaa lasoo sheegayaa in la afduubtay,taas oo dadka maqlay ay Cabsi soo food saartay.
Qafaalka ayaa ka dhacay Kismaayo koox aan la heyb garan ayaana la sheegay in ay geysteen.
Lama yaqaano halka lala aaday Wiilkaasi dhalinyarada ah,iyadoo sidoo kale Ehelada wiilakasi ay sheegeen in taleefoon laga soo wacay ayna dalbadeen kooxda Lacag madax furasho ah.
Muddo 10 cisho ka badan ayuu wiilkaasi Kooxda Afduubtay gacantooda ku jiraa,wer wer iyo cabsi ayaana Qoyskiisa Soo food saartay.
Maamulka Jubbaland weli kama aysan hadlin Wiilkaasi la afduubtay iyadoo tani ay saameyn inay reebto laga cabsi qabo.
Previous articleSAWIRRO: RW Kheyre oo Qorshe lagu farxo kala soo laabtay safarkii Mareynkanka
Next articleHirshabelle oo ku dhawaaqday dadkii ka barakacay Beledweyne
DAAWO: Wasiir Isloow oo lagu dhagan yahay iyo Su'aalo laga weydiiyay...
Wasiir xukumada Kheyre katirsan iyo safiirka Turkiga oo kawada hadlay arimaha...